IINDAWO ZOKUSEBENZA-i-NJ kunye ne-NY yeNdawo yokuThengisa, ukuKhuselwa, ukuKhuselwa kwembonakalo kunye nabameli beBanki
ikhaya / IMIBA YOKUSEBENZA
Iindawo Zokuziqhelanisa eNew York
ENew York naseNew Jersey, abathengi bethu banokulindela ukubekwa emgceni nangaphandle kwenkundla. Inyathelo lokuqala ekummeleni ngokubhekisele phambili kukufaka impendulo kwinkundla efanelekileyo kwaye ufune ukuphuculwa kokuncitshiswa kokuqhutywa kwenkomfa yokuxelwa kwangaphambili. Sivumele ukuba sikuncede ufumane eyona ndlela yokusindisa ikhaya lakho.
I-New Jersey Bankruptcy Isahluko 7 okanye i-13
Ukubhengezwa kungabakho okanye kungabi yile nto uyifunayo. Nxibelelana nathi ukuze ujonge imeko yakho ukuze uqonde ukuba ilungile le nto kuwe.
Unokuba kwimeko yokuba ukubhengezwa njengongenamali kunokukunceda, kodwa kukho amathuba apho ungabinakho ukuhlawula ukubhengezwa.
Nxibelelana nathi ukuba uhambe ngaphezu kweenketho zakho.
Eyona nto ibaluleke kakhulu ekufuneka uyikhangele xa ugcina igqwetha lokuvala kwakho ngumntu onomdla kwaye unika ukuvalwa kwakho oko kufanele. Iofisi yethu inenkqubo yokulawulwa kwamatyala eqinisekisa ukuba asizukuphoswa yinto xa iza kuvalwa. Nokuba liyikhaya lakho okanye yipropathi yotyalo-mali, thembela kwinyathelo lakho elilandelayo.
Umthetho wamashishini amancinci
Iinkonzo esizinikezela kwishishini lethu kunye neqela elidibeneyo zilungiselelwe iimfuno zeshishini ngalinye, kwaye ukusuka emsebenzini wenguqu ukuya kwimiba yemicimbi enzima. Iqela lethu lithatha indlela ethe kratya ekusombululeni iingxaki nasekuncedeni abathengi bethu bacwangcise kwangaphambili. Siyakwazi ukukwenza oko ngenxa yamava obuqu ekusebenzisaneni namashishini amancinci kunye neenkampani.
Iinkundla zamatyala zokuphelisa imali zaseNew Jersey zisasebenza!
Ndigcwalisele ukuBhengezwa njengongenamali e-New Jersey, kwaye intlanganiso yam yababolekisi (aka-341 Hearing) iye yahlehliswa. Oku kuthetha ntoni kuLuhlu lwam ugculelo lwam?
Ukufudukela kwelinye ilizwe kusapho
Ukufuduka kwase-US-Ukwahlukana kunye neKhadi eluhlaza
Ukufuduka kwase-US: Uhlengahlengiso lweMeko vs ukutshintsha kweMeko
Ilungelo lokushicilela © 2020 nguPatel & Soltis, LLC. Onke amalungelo agciniwe.